Published: January 27, 2016 13:00 PM
कपिलबस्तु, माघ १३ । कपिलबस्तुको शिवराज–३ मा आज बिहान बसको ठक्करबाट एक साईकलयात्रीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय ५० वर्षीय दुर्गाप्रसाद कोईराला रहेका छन् । बसको ठक्करबाट गम्भीर घाईते भएका कोईरालाको उपचारको क्रममा सामुदायिक अस्पताल संजीवनीमा बिहान पौने ८ बजे मृत्यु भएको हो । ...
स्थानीय चुनावका लागि तयारी भइरहेको छ : मन्त्री थापा
Published: January 27, 2016 15:42 PM
बिराटनगर, माघ १३ । उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले स्थानीय निकायको चुनावका लागि सरकारले तयारी थालिसकेको दावी गरेका छन् । विराटनगरमा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्ला र ५२ नगरपालिकाको अर्ध वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा मन्त्री थापाले सरकारले स्थानीय निकायको चुनावका लागि राजनीतिक परामर्श गरिरहेको बताए । ...
आगलागीबाट एक जनाको मृत्यु, दुईजना गम्भीर घाइते
Published: January 27, 2016 12:03 PM
बैतडी, माघ १३ । बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका वडा नं ३ को एक घरमा गएराति आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा स्थानीय देवल निवासी ४६ वर्षीया प्रेमबहादुर खड्का रहेका छन् । गएराति १०ः३० बजेतिर आफ्नै तीनतले...
कृष्णप्रसादको नाम हटाएर विवेक गुमाउदिन: संचारमन्त्री
Published: January 27, 2016 11:52 AM
काठमाडौं, माघ १३ । सुचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले कृष्णप्रासाद भट्टराई आमसंचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नाम हटाउने मन्त्रालयले कुनै गृहकार्य नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । भट्टराई नाम हटाउन नहुने भन्दै आज संचार मन्त्रालयमा मन्त्री राईको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेका नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय...
बाख्राको खोरमा बाख्रा झैं बाँधेर राखिएकी बालिकाको उद्धार
Published: January 27, 2016 10:07 AM
इलाम, माघ १३ । इलाम नगरपालिका–२ स्थित थेबेचोक नजिकै रहेको गाउँबाट अपाङ्गता भएकी एक बालिकालाई खोरमा थुनेर राखिएको अवस्थामा उद्धार गरिएको छ । रातभरि चिच्याउने, रुने तथा कराउने गरेका कारण परिवारले उनलाई घरभन्दा केही माथि बाख्राको खोरमै सानो कोठा बारेर थुनेर राखेको अवस्थामा मङ्गलबार उद्धार गरिएको हो । ...
१५५ जनाको खोजीमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज
Published: January 27, 2016 10:00 AM
बर्दिया, माघ १२ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले चोरी–सिकार नियन्त्रण अभियानलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउने भएको छ । निकुञ्जले नेपाल प्रहरी, प्रशासन, नेपाली सेना, जिल्ला वन, समुदाय र युवा समितिसँगको संयुक्त सहकार्यमा सो कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन लागेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रमेशकुमार थापाले...
अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीबीचको विवादले विरामीलाई सास्ती
Published: January 27, 2016 09:29 AM
सिन्धुली, माघ १३ । सिन्धुली जिल्ला अस्पताल र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा केही दिन यता चिकित्सक र कर्मचारीबीच विवाद हुँदा उपचार सेवा प्रभावित बनेको छ । जिल्ला अस्पतालका मेसु चिकित्सक फणिन्द्रप्रसाद बराल र महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक सुमित्रा गौतमबीच आन्तरिक विवाद हुँदा विभिन्न मेडिकल डिपार्टमेण्टबाट...
सिरहामा ४ दशमलव २ रेक्टर स्केलको भूकम्प
Published: January 27, 2016 10:13 AM
गुल्मीमा खुल्यो अनौठो बैंक
Published: January 27, 2016 13:31 PM
गुल्मी, माघ १३ । गुल्मीमा कपडा किन्न नसक्नेका लागि ‘क्लोथ बैंक’ अर्थात् कपडा घरको स्थापना गरिएको छ । विभिन्न समयमा विपतमा परेका तथा गरिबीका कारणले लुगा किनेर लगाउन नसक्नेका लागि क्लोथ बैंकको स्थापना गरिएको हो । बैंकमा जम्मा भएका कपडा असहायलाई वितरण गरिनेछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलको पहलमा...
बुद्धबारे भ्रम चिर्न सात देशलाई पत्र, यस्ता छन् मन्त्रीका महत्वाकांक्षी योजना
Published: January 27, 2016 09:57 AM
काठमाडौ, माघ १३ । सरकारले गौतम बुद्धको जन्मस्थलका बारेमा विभिन्न देशमा भ्रम देखिएको भन्दै त्यसलाई चिर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । नेपालले ती देशका पाठ्यपुस्तक, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा भ्रम देखिएको भन्दै त्यसलाई निवारण गर्न कूटनीतिक पहल थालेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन...
प्रधानमन्त्रीको गुनासो: मजाक किन उडाउने ?
Published: January 27, 2016 11:30 AM
काठमाडौं, माघ १३ । सरकार गठन भएको १०७औं दिनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा मंगलबार सम्पादकसहितका पत्रकारसँग भेटघाट गरे । ओलीले संविधानका विशेषता, संविधान कार्यान्वयन, संविधान संशोधनपछिको अवस्था र भावी योजनाबारे करिब ४५ मिनेट भनाइ राखे, १५ मिनेटजति मात्रै पत्रकारसँग अन्तक्र्रिया गरे । उनका मुख्य भनाइः चितुवा...
कांग्रेस अब सरकारमा आउँछ, मैले बोल्दा हावादारी भनिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
Published: January 27, 2016 07:34 AM
काठमाडौं, माघ १२ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असहज स्थिति सहज नभएसम्म आफू छिमेकीमुलुक भारत भ्रमणमा जानु वाञ्छनीय नभएको बताएका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार विभिन्न दैनिक पत्रिकाका सम्पादक र वरिष्ठ पत्रकारसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा अघोषित नाकाबन्दी र आपूर्ति व्यवस्थापनको असहजता अन्त्य...
रौतहटमा गाडी चल्न दिने मोर्चाको निर्णय
Published: January 26, 2016 18:12 PM
रौतहट, माघ १२ । रौतहटमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सार्वजनिक यातायातका साधन सन्चालन गर्न दिने भएको छ ।मोर्चाको निर्णयसँगै रौतहटमा लामो समयदेखि बन्द रहेका यातायातका साधन सन्चालनमा आउने भएका छन् ।मोर्चाआबद्ध दलहरुको मंगलबार बसेको बैठकले रौतहटको गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखन्डको वीरेन्द्र राजमार्गमा यातायातका साधन चल्न...
Published: January 26, 2016 16:03 PM
वीरगन्ज, माघ १२ । सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतीय भन्सार कार्यालयले नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने सवारीमा कडाई गरेको छ । निर्वाध रुपमा भारत प्रवेश गर्दै आएका नेपाली नम्बरका गाडी भारतीय भन्सार कार्यालयको अनुमति बिना अव भारत प्रवेश गर्न नपाउने भएका हुन् । भारतले नेपाली नम्बरका मोटरसाइकललगायत...
तराई–मधेसको आन्दोलनलाई पेलेर मात्र समाधान हुँदैन: अध्यक्ष शर्मा
Published: January 26, 2016 17:39 PM
काठमाडौं, माघ १२ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राज्यको तराईलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नरहेको बताएका छन् । १३ औं कृष्णमोहन–नुडुप स्मृति दिवसका अवसरमा मंगलबार ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले तराई मधेसमा जारी आन्दोलनलाई पेलेर मात्रा समाधान नहुने बताए । ...